Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Mudaharaado Xoogan oo Gilgilay Woqooyiga Shawo.
Deg Deg: Mudaharaado Xoogan oo Gilgilay Woqooyiga Shawo.
Posted by Dulmane	/ November 10, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Minjar Shankora ee woqooyiga Gobolka Shawa ee dhulka Axmaarada ayaa sheegaya mudaharaado aad uwaawayn oo gumaysiga lagaga soo horjeedo oo halkaas kasocda.
Sida xogta aan kuhelayno mudaharaado aad uwaawayn ayaa gilgilay guud ahaan woqooyiga Gobolka Shawa gaar ahaan magaalada Minjar Shankora, waxayna mudaharaadadu saamayn kuyeesheen isusocodka dadwaynaha iyo guud ahaan amaanka Gobolka.
Mudaharaadadan oo ay soo qaban qaabiyeen dhalin yarada Axmaarada ayaa gaadhay qaybo kamid ah Gobolka Oromia halkaas oo sida lasheegayo ay kabilowdeen kacdoono mataano la ah kuwa magaalada Minjar Shankora kuwaas oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinta Oromia oo gacansiinaya kuwa Axmaarada.
Warka ayaa intaas kudaraya in dhalinta Axmaaradu ay weerar toos ah kuqaadeen goobo ay dagan yihiin shirkado shisheeye oo lagaleeyahay wadanka China kuwaas oo sida lasheegayo ay dhalintu marar hore digniin siiyeen.
Shirkadaha Shiinayska ah ayaa lasheegayaa in ay dadka deegaanka udiideen wax xuquuq ah iyagoo dhamaan shaqaalaha kakeensaday wadanka Shiinaha, waxayna dadka deegaanku siwayn uga soo horjeedsadeen dhaqanka xun ee ay kuheshiiyeen xukuumada wayaanaha iyo shirkadaha shisheeye.
Goob jooge kusugan magaalada Minjar ayaa sheegaya in ciidamada wayaanuhu ay toogasho kudileen 3 kamid ah dadkii mudaharaadada waday ee Axmaarada, wuxuuna goob jooguhu sheegayaa in ciidamo dheeraad ah lageeyay Gobolkaas.